Wararka Maanta: Khamiis, July 22, 2010-Ciidamada Puntland Oo Sii Kordhiyay Musaafurinta Reer Kuunfreedka ,Iyo Hub Maanta Laga aruurinayay Bakhaarada Bosaaso
Waxaa howlahan ka qayb qaadanaya laamaha kala duwan ee Ciidamada Puntland si loo helo xog ku saabsan kiisaskii horay u dhacay oo ay ku jiraan qaraxyo lagu dilay qaar ka mid ah Saraakiisha Ciidanka.
Howlgal ay sameeyeen Ciidanka ayaa la sheegay in ay ku soo qabteen 5 ruux oo dhalinyaro ah, kuwaasi oo sugnaa mid ka mid ah guryaha Bosaaso, isla markaana tacshiirad ku furay ciidamado howlgalo ka waday
Taliye ku xigeenka Ciidanka Boliska Puntland Maxamed Siciid Jaqanaf ayaa tilmaamay in howlgaladan lagu helay xog badan oo ku saabsan kiisaskii ka dhacay Bosaaso.
Waxaa kaloo uu Taliyaha sheegay in dilalkii ka dhacay Puntland qaarkood ay soo abaabuleen dad u dhashay deegaanka ,Balse gacanta lagu soo dhigi doonoo waqtiyada soo socda.
Ciidanka ayaa saaka baarayay bakhaarada Magaalada ,Waxaana la sheegay in hub aad u fara badan laga aruuray qaar ka mid ah Mulkiilayaasha Goobaha Ganacsi ku leh Degmada.
Ugu danbayntii Madaxwaynaha Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa xusay in howgladan ay noqon doonaan kuwa lagu xaqiijin doono Falalkii Gobolka ka dhacay.
Faisel Maxamed Hassan ,Hiiraan Online